Hot-Itinye kpaliri welded waya ntupu - China Hebei Samsung Metal waya ntupu
Welded waya ntupu bụ onye na-ewu ewu ihe na ihe, na-ewu na ụlọ ọrụ. Ọ na-mere nke ala carbon ígwè waya, igwe anaghị agba nchara waya mgbe ịgbado ọkụ na n'elu n'imeso. Welded waya ntupu ákwà na ọtụtụ-eji ewu ewu, na-echebe usoro, filtration, nri, agriculture na na. Hot-tinye galvanized welded waya ntupu na-n'ozuzu mejupụtara larịị ígwè waya. N'oge nke nhazi ọ na-aga site na a na-ekpo ọkụ zinc nkpuchi usoro. Nke a na ụdị welded ntupu ike na square op ...
Tụkwasịnụ Ikike: 200 Roll / apụta kwa Day
Welded waya ntupu bụ onye na-ewu ewu ihe na ihe, na-ewu na ụlọ ọrụ. Ọ na-mere nke ala carbon ígwè waya, igwe anaghị agba nchara waya mgbe ịgbado ọkụ na n'elu n'imeso. Welded waya ntupu ákwà na ọtụtụ-eji ewu ewu, na-echebe usoro, filtration, nri, agriculture na na.
Hot-tinye galvanized welded waya ntupu na-n'ozuzu mejupụtara larịị ígwè waya. N'oge nke nhazi ọ na-aga site na a na-ekpo ọkụ zinc nkpuchi usoro. Nke a na ụdị welded ntupu ike na square oghere bụ ezigbo maka anụmanụ onu structuring, na-echepụta ihe waya igbe, grilling, nkebi Ndinam, ji kpachie oghere nzube na igwe nchedo fencing.
Hot-tinye galvanized welded waya e ji mara: ewepụghị na edo elu, ike Ọdịdị, ezi iguzosi ike n'ezi na magburu onwe ọma corrosion na-eguzogide ọgwụ.
Nke a na ụdị welded waya nwere abụọ nhazi na n'ichepụta usoro, galvanizing welded ntupu tupu ma ọ bụ mgbe ịgbado ọkụ. The kpaliri welded waya ntupu mgbe ịgbado ọkụ dị mma karịa tupu ịgbado ọkụ maka akuku nke ịgbado ọkụ. Na-ekpo ọkụ-tinye galvanizing, welded waya nwere ike igbochi corrosion na kwa ngwa.
Hot-tinye galvanized welded waya nkọwapụta:
1) Hot itinye kpaliri welded ntupu + ịkwanyere mkpuchi (Green 6005): 12.7 × 12.7mm / waya n'obosara esịtidem 0, .65mm - ntekwasa 0.90mm / mpịakọta elu 100cm / mpịakọta ogologo 5m.
2) Hot itinye kpaliri ntupu (kpaliri mgbe ịgbado ọkụ): 12.7 × 12.7mm / waya n'obosara 0.65mm / mpịakọta elu 50cm / mpịakọta ogologo 5m.
3) Hot itinye kpaliri ntupu (mgbe ịkpa ákwà) + ịkwanyere mkpuchi (Green 6005): ntupu 25mm / waya n'obosara esịtidem 0.80mm - ntekwasa 1.00mm / mpịakọta elu 50cm / mpịakọta ogologo 10m.
4) Hot itinye kpaliri ntupu (kpaliri mgbe ịkpa ákwà): ntupu 13mm / waya n'obosara 0.70mm / mpịakọta elu 50cm / mpịakọta ogologo 10m.
dayameta: 0,65 +/- 0.025mm.
Zn-mkpuchi: min. 20g / m².
Ike ọdụdọ: 300 - 450 N / mm².
Eme na-elu: 150kg coils na esịtidem DIA. nke +/- 270mm na mpụga DIA. nke +/- 450mm.
Waya nlele dayameta
50,8 ka 305
Gi square waya ntupu nkọwapụta:
24.75kg / mpịakọta
33kg / eriri igwe
41.25kg / eriri igwe
18kg / eriri igwe
20kg / eriri igwe
Anyị na-ekpo ọkụ kpaliri welded waya ntupu na nnukwu ngwaahịa:
Hot zinc welded waya ntupu
Hot-mikpuo galvanized welded waya ntupu
Galvanized welded waya ntupu (kpaliri Mgbe ịkpa ákwà) Hot Itinye kpaliri Waya
Galvanized welded waya ntupu (kpaliri Tupu ịkpa ákwà) Hot Itinye kpaliri Waya
Ịkwanyere welded ntupu (ọkụ tinye)
Previous: Electro kpaliri welded waya ntupu
Osote: Staninless Steel Aguba waya nwere ogwu
Hot tinye kpaliri welded waya ntupu
Hot tinye welded waya ntupu